Tag: fitomboan'ny finday | Martech Zone
Tag: fitomboan'ny finday
Isaky ny andro vitsivitsy dia mifamaly izahay sy ny zanako vavy hoe iza no manana tadim-pefy. Mitsiriritra ny tadiko aho ary avelany ao anaty fiarany ny tadiny. Raha samy manana ny isan'ny isan-jaton'ny tambajotram-bola ny finday… miambena! Nanjary ampahany amin'ny olona ny findaintsika. Ny tambajotram-pifandraisantsika amin'ireo namantsika, ilay mpitam-boky fitadidiantsika ankehitriny, ilay namantsika izay mampatsiahy antsika ny zavatra hatao manaraka, ary na dia
OpinionLab dia namoaka toro-hevitra dimy izay hanampy ny orinasa hanatsara ny traikefa finday ary hisarika mpanjifa vaovao: Atombohy amin'ny traikefan'ny mpampiasa: ny traikefan'ny mpampiasa tsara no jerena voalohany amin'ny fahombiazan'ny finday. Matetika loatra, ny orinasa dia manandrana maka tahaka ny fizotran'ny tranokala nentim-paharazana amin'ny fananana finday. Mba hiantohana ny fampiasana finday tsara indrindra dia mifantoha amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny orinasa, izay mety miovaova be amin'ny an'ny tranonkala nentim-paharazana. Zavatra tsotra toy ny haben'ny bokotra (lehibe ve izany